गर्भावस्थामा शारिरिक सम्बन्ध राख्दा के हुन्छ ? « News of Nepal
गर्भावस्थामा शारिरिक सम्बन्ध राख्दा के हुन्छ ?
एजेन्सी । खासमा पेटमा बच्चा भएको समयमा शारिरिक सम्बन्ध राख्न हुन्छ की हुँदैन भन्ने विषयमा धेरै मानिसहरुको जिज्ञासा रहने गरेको पाइन्छ । यो विषय धेरे दम्पतीको जिज्ञासा र चासोको विषय पनि हो । गर्भवती महिलाको गर्भधारणको कुल समय सामान्यतया नै महिना एक हप्ता हुन्छ ।
यसलाई चिकित्साक विज्ञानमा सजिलोको लागि ३ भागमा बाँडिएको छ । पहिलो तीन महिना, दोस्रो तीन महिना, तेस्रो तीन महिना । पहिलो तीन महिनामा गर्भमा रहेको भुर्णको प्रारम्भिक विकास र त्यसको सुरक्षाका आवयवहरु बन्ने तीनको व्यवस्थापन गर्ने समय हो ।
त्यसबेला शरिरमा अत्याधिक कम्पन्नले गर्भको बच्चालाई हानी गर्न सक्छ । त्यसैले पहिलो तीन महिना यौन सम्पर्कको लागि त्यति उपयुक्त मानिदैन । तर यो समयमा सम्बन्ध राख्नुहुन्छ भने त्यसबेला अत्यधिक कम्पन्न हुने गरी सम्बन्ध नराख्दा राम्रो मान्छि ।
गर्भधारणको दोस्रो त्रैमासिक यौन सम्पर्कको लागि सबै भन्दा सुरक्षित र उपयुक्त मानिन्छ । त्यति खेर गर्भको बच्चालाई प्रकृतीले नै सुरक्षा प्रदान गरेको हुन्छ ।
गर्भ धारणको तेस्रो त्रैमासिक समय महिलाको पेट ठुलो हुने भएर सामान्यतया महिला पुरुषले प्रयोग गर्ने पुरुष माथि महिला तल भएर गरिने सम्भोग गर्न अप्ठारो हुन्छ ।
त्यस्तोमा यथेष्ट घर्षण र लिंग प्रबेशमा बाधा पुग्ने मात्र होइन गर्भासयमा बढि चाप पर्ने हुदाँ महिलालाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ । र पेटमा रहेको बच्चलाई पनि असर पुग्न सक्छ ।